ဇန်နဝါရီ Stephenson က: အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးကိုယ်ရေးဖိုင်
ဇန်နဝါရီ Stephenson က 1970 နှင့် 1980 ခုနှစ်များတွင်အမျိုးသမီးဂေါက်သီးအတွက်ထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဂိမ်းမှတပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းဆောင် ခဲ့. , သို့သော်အချို့သူမ၏ဂေါက်သီးလွှမ်းမိုးလိင်အယူခံအပေါ်သူမ၏အလေးထားယုံကြည်သည်။ ထိုဂေါက်သီးတော်တော်လေးကောင်းသည်: Stephenson က 1980 ၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းသုံးခုကိုအဓိကချန်ပီယံ, ရှိသမျှအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
မွေး date: ဒီဇင်ဘာ 22, 1951
မွေးရာဌာန: ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျ
အမည်ပြောင်: သူမ၏အချိန်ပြည့်ခရီးစဉ်ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းကြောင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောမှသူမ၏အကူအညီအငယ်ကစားသမားအချို့တို့က "Nana" ဟုခေါ်ခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ Stephenson ကအဘို့အနိုင်ပွဲများအရေအတွက်
LPGA Tour: 16 (ဤအနိုင်ပေးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြသည်)
ဗိုလ်ကြီးအတွက် Stephenson ကယ့်သုံးခုကိုအနိုင်ပေးသည့် 1981 ခဲ့ကြသည် du Maurier Classic , 1982 LPGA ချန်ပီယံရှစ်နှင့် 1983 ခုနှစ်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ။
တစ်နှစ်တာ၏ LPGA Tour လူသစ်, 1974
အဖွဲ့ဝင်, Fame ၏အားကစားသြစတြေးလျခန်းမ
ဇန်နဝါရီ Stephenson ကအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဇန်နဝါရီ Stephenson ကပထမဦးဆုံး LPGA Tour ကြယ်တဦးတည်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဘက်လျက်နှင့်စျေးကွက်မှချဉ်းကပ်နည်းလိင်-ရောင်းချချန်ပီယံရန်, 1980 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီး၏ "ဒါဟာမိန်းကလေး" ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူမ၏ဆံပင်ရွှေရောင်-pinup အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်ကောင်းသောဂေါက်သီးဂိမ်းဘာအရိပ်အာဝါသလွှမ်းမိုးလှပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်နေစဉ်, Stephenson က 1964 ခုနှစ်တွင်စတင်သြစတြေးလျ၌ငါးနှစ်ဆက်တိုက် New South Wales ကျောင်းသူလေးချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သဖြင့်, New South Wales ဂျူနီယာချန်ပီယံရှစ်အတွက်သုံးဖြောင့်ကိုအနိုင်ပေးနဲ့နောက်တော်သို့လိုက်။ သူမသည် 1973 ခုနှစ်တွင်လိုလားသူလှည့်နှင့်အနိုင်ရ သြစတြေးလျကိုဖွင့် အဲဒီနှစ်။ Stephenson က 1974 ခုနှစ်အတွက် LPGA Tour ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအမည်ရှိ တစ်နှစ်တာ၏လူသစ် စုငွေစာရင်းကိုအပေါ်တစ်ဦး 28 အရပ်ကို finish ကိုအတူ။
သူမရဲ့ပထမဦးဆုံး LPGA အောင်ပွဲ 1976 စာရာ coventry Naples ဂန္ထဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 1981 du Maurier (ထို့နောက် Peter Jackson Classic လို့ခေါ်တဲ့နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများဗြိတိန်ပွင့်လင်းခြင်းဖြင့်အဓိကအဖြစ်အစားထိုး), 1982: သူမ၏အများဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကာလသူမကနှစ်ဆက်တိုက်အတွက်သူမ၏ဗိုလ်ကြီးများ၏အားလုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သည့်အခါအစောပိုင်း 1980 ခဲ့သည် LPGA ချန်ပီယံရှစ် နှင့်, 1983 အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ။
သူမရေချိုးကန်ထဲမှာ စုပေါင်း. သည့်အခါ Stephenson က, Mid-80s မှအစောပိုင်းကာလအတွင်းသူမ၏ဂေါက်သီးအဖြစ်သူမ၏လိင်အယူခံဝင်ဘို့အဖြစ်ကျော်ကြားဖြစ်လာခဲ့သည် - သာစည်ပိုင်းကိုဖြည့်သည့်ဂေါက်သီးဘောလုံးကဖုံးလွှမ်း (သူမတစ်ဦးဓာတ်ပုံများတွင်အသက်အရွယ် 65 မှာ 2017 ခုနှစ် recreated တစ် pose golf.com) - နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦး pinup ပြက္ခဒိန်၌တည်၏။ သူမသည်ကြီးတွေဆံပင်, တောက်ပမိတ်ကပ်နှင့်မျက်စိ-ဖမ်းမတ်မတ်ခဲ့, သူအပြည့်အဝစျေးကွက်မှသူမ၏ချဉ်းကပ်ကိုင်စွဲဖို့ LPGA Tour တိုက်တွန်းခဲ့သည်: "မိန်းမကဲ့သို့ကွညျ့ရှုနှင့်တစ်ဦးသောသူကဲ့သို့ကစား" ဟုသူမကဆိုသည်။
Stephenson ကဂေါက်သီးမှသူမ၏အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူဤအချိန်ကာလအတွင်းပရိသတ်က LPGA Tour ကြီးပြင်းပေမယ့်အများအပြားကြောင်းချဉ်းကပ်ဝေဖန်အဘယ်သူမျှမမေးခှနျးကရှိပါတယ်။ နှင့်မည်မျှအာရုံစိုက်ဆိုလျှင်, LPGA တစ်ဦးခရီးစဉ်အဖြစ်, အထီးအားကစားပရိသတ်များအတွက်ရန်ခရီးစဉ်ရောင်းချရန်၎င်း၏ဂေါက်သီး၏ရူပပေါ်တွင်တင်သင့်ပါတယ်နေဆဲယနေ့အငြင်းပွားဖွယ်ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဂေါက်ကွင်းတွင်, Stephenson က 1987 ခုနှစ်တွင်သူများကိုအနိုင်ပေးသည့် LPGA အပေါ်သူမ၏နောက်ဆုံးသူတွေကိုဖြစ်ခြင်း, 1981, 1983 နှင့် 1987 ခုနှစ်တွင်သုံးကြိမ်တစ်ခုချင်းစီအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Stephenson က 1990 တစ်လျှောက်လုံး LPGA ဖြစ်ရပ်များကစားဆက်လက်ပေမယ့်သူမရဲ့ဘယ်ဖက်လက်စွပ်လက်ချောင်းနှစ်ခုကိုသောနေရာများ, ဆဲအအေးသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောရာသီဥတုတွင်သူမ၏ကစားနှောင့်အယှက်တစ်ခုဒဏ်ရာအတွက်ကျိုးပျက်ခဲ့သည် 1990 ခုနှစ်မိုင်ယာမီအတွက်စည်းကမ်းမဲ့အပြုအမူစဉ်အတွင်းခံစားခဲ့ရတစ်ဦးဒဏ်ရာကနှေးကွေးနေခဲ့သည်။ 1990 ကနေအပေါ်, သူ LPGA ပိုက်ဆံစာရင်းတွင် 30 ထက်ပိုမိုမြင့်မားပြီးဆုံးခဲ့ပေ။
Stephenson က (ယခု Legends ခရီးစဉ်ကိုခေါ်) ကိုအမျိုးသမီးများနေ့အကြီးတန်းဂေါက်လှည့်လည်သူမတွေ့ရှိခဲ့ကူညီပေးခဲ့သတဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်အနိုင်ရမှပေါ်သွား၏။
2003 ခုနှစ်တွင်သူမဖြတ်ပျောက်ဆုံး, ချန်ပီယံလိဂ်ခရီးစဉ်ပေါ်မှာကစားရန်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ မကြာမီတွင်ကြောင်းဖြစ်ရပ်မတိုင်မီသူမကမှတ်ချက်များ LPGA Tour မှအာရှဂေါက်သီး၏ရောက်လာမျနှင့်အတူအငြင်းပွားဖွယ်ရာစေ၏။
Stephenson ကသင်တန်းဒီဇိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အနည်းငယ်အမြိုးသမီးမြားအကြားဖြစ်ပြီးအဆစ်နှင့်အတူလူများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူမလည်း (YouTube ပေါ်မှာယခုတဦးတည်းအရာ၏) 1980 နဲ့ 1990 ခုနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်ကို VHS တိပ်ခွေထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူမ၏ကုသိုလ်ဖြစ်အားထုတ်မှုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အကွိမျမြားစှာ Sclerosis Society ၏ဂုဏ်ထူးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်းပါဝင်သည်ပါပြီ။
ဇန်နဝါရီ Stephenson ကအသေးအဖွဲ
Stephenson ကရဲ့အသက် 16 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း LPGA အောင်ပွဲ၏ 12 ခုနှစ်, ပြေးသမား-တက်မှရွေးကောက်ပွဲဝင်ငွေပေါ်သွား၏ Fame ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးခန်းမ ။
ဇန်နဝါရီ Stephenson က Tour သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင်ဒုတိယအများဆုံးအဘို့အချည်ထား, LPGA ယှဉ်ပြိုင်မှုရှစ်တွင်း-In-One မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
Stephenson ကယေဘုယျအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး Tour ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်ကွင်းဒီဇိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ရဖို့စဉ်းစားသည်။
2011 ခုနှစ်တွင်သူမကြယ်မှုနှင့်အတူ Dancing များ၏သြစတြေးလျတီဗီဗားရှင်းအပေါ်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ Stephenson က: "။ ။ ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်သူကလူအများစုအထီးများမှာဒါဟာဘဝတစ်ဦးအချက်ကိုရဲ့လိင်အယူခံဝင်မြှင့်တင်ရန်ရှိသည်, မိန်းကလေးများလှပသောမဟုတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ "
"သူတို့ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောထိတွေ့ရှိသည်ကြောင့်ဂေါက်သီးပိုကောင်းမိတ်ဆွေတို့ကိုပါစေ။ " - Stephenson က
Stephenson ကရဲ့ LPGA နှင့်အခြား Pro ကိုနိုင်ပွဲများများစာရင်း
ဤတွင် LPGA Tour အပေါ်ဇန်နဝါရီ Stephenson ကအားဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည့်ဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲနေသောခေါင်းစဉ်:
1976 စာရာ coventry Naples Classic
1976 ဘာမင်ဂမ် Classic
1981 Peter Jackson ဂန္ထဝင် (နောက်ပိုင်းတွင် du Maurier ဂန္ထဝင်အမည်ပြောင်း)
1981 ခုနှစ်သူ Mary Kay Classic
1981 ယူနိုက်တက်ဗာဂျီးနီးယားဘဏ် Classic
1982 LPGA ချန်ပီယံရှစ်
1983 တာက်ဆန် Conquistadores LPGA ပွင့်လင်း
1983 ခုနှစ်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open
1973 ခုနှစ်သြစတြေးလျ Ladies Open ကို (ALPG)
1977 သြစတြေးလျ Ladies Open ကို (ALPG)
1981 ကမ္ဘာ့ဖလား Ladies ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ (JLPGA)
1985 Hennessy ပြင်သစ် Open ကို (စေ)
1985 Nichirei Ladies ဖလား (JLPGA)
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအယ်ဒီတာ့အာဘော်လမ်းညွှန်ချက်များ & မစ်ရှင်
မျက်နှာပန်းချီများအတွက်ထိပ်တန်း 10 အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသိကောင်းစရာများ
1840 ကနေ 1850 မှ timeline
ဗိသုကာရစ်ချတ် Meier အားဖြင့် Getty Center ကအကြောင်း
မိုးလေဝသဂြိုလ်တု: (အာကာသ မှစ. !) ကမ္ဘာမြေရဲ့မိုးလေဝသအပြောင်းအလဲကိုခန့်မှန်းခြင်းသည်
Hard Times သတင်းစာအဘို့အသမ်မာကမျြးအခနျးငယျ
"မွငျ့မွတျ Sukhmani" Prayerbook, CD ကိုနှင့်ဒေါင်းလုပ်များအတွက်ထိပ်တန်းအရင်းအမြစ်များ
လူးဝစ် Pasteur ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဘီးခန္ဓာဗေဒ 101: ဖွဲ့စည်းပုံ
Glow Endothermic သို့မဟုတ် Exothermic ကပ်လျက်ဖြစ်ပါသလား
အာဖရိကန်အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်ရှင် - MN
Hysteron proteron (အပြောအဆို)